एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन, प्रचण्डलाई आशंका ! - १६ असार २०७७, NepalTimes
एमाले दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन, प्रचण्डलाई आशंका !
मदन जन्मजयन्तीका अवशरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण नेकपाको स्थायी समिति बैठक निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश छलफल नगरी सकिएको छ । सरकार हटाउन भारत लागिपरेको र पार्टीकै नेताहरुको संलग्नता रहेको भन्दै ओलीले अभिव्यक्ति दिएपछि मंगलबार स्थायी समिति सोही विषयमा केन्द्रीत भएको थियो ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा दल दर्ताका लागि परेको निवेदनको विषयमा छलफल भएको बताए । बैठकमा आज सीमा समस्या सम्बन्धि छलफल सकाएर कोभिड—१९ को विषयमा कार्यसूची रहेपनि छलफल हुन नसकेको उनले बताए । ‘‘सीमा समस्या सम्बन्धि बोल्न बाँकी सदस्यहरुले बोल्ने र कोभिड—१९ को विषयमा छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर यो विचमा अन्य विषयमा पनि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेर स्थायी समितिले मदन जयन्तीका अवशरमा प्रधानमन्त्रीले सरकार हटाउन खोजेको, भारतसँग सम्बन्धि विषय र पार्टीका नेताहरुको संलग्नताको पनि चर्चा भएको सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले छलफल आवश्यक रहेको थियो ।’’, उनले भने, ‘‘अर्को विषय २ दिन अगाडी निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नाम गरेको पार्टी दर्ताका लागि आवेदन परेको कुराको सन्दर्भमा पार्टीको कुनै नेता कार्यकर्ताको संलग्नता छ छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन छलफल भयो ।’’’
झापाकी सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा एमाले पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिएको भन्ने सूचनापछि बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो पार्टी कसले किन दर्ता गर्न लागेको हो भनेर विषय प्रवेश गराएका थिए । दल दर्ताको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘म यहि पार्टीको अध्यक्ष भएकाले मेरो पार्टी यहि हो ।’
साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा प्रष्ट पार्नुभएको उनले बताए । मंगलबारको बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भीम रावल लगायत १८ जना नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । अर्को बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ